Daniel Foust iyo 'Ursa' oo ah shaqo dijitaal ah | Abuurista khadka tooska ah
Joaquín Sorolla waa mid ka mid ah halyeeyada rinjiyeynta iyo midka sida ugu fiican u yaqaan sida loo qabsado nalka sawiradaas saliidaha ah halkaasoo uu ku muujiyey farsamadiisa weyn dareenkan. Rinjileeye uu qofku ku dhiirrigelin karo inuu isku dayo inuu ka qayb qaato daraasaddiisa mid ka mid ah walxaha ay adag tahay in lagu sawiro shiraac.
Daniel Foust waa fanaan aan la aqoon laakiin waa kuma aragti ka soo qaad waxa ay tahay barashada nalka iyo shaqada la socota, wax aan sahlaneyn iyo in ka badan haddii aan ka sameyno dhexdhexaad dhexdhexaad ah sida mid ka mid ah barnaamijyada Adobe. 'Ursa' waa shaqo soo jiidaneysa dareenka daawadayaasha sababo la xiriira ciyaartaas iftiinka mugdiga ah ee wajiga gabadha quruxda badan iyo sida nuurku u soo jiito quruxda muuqaalkeeda, oo ay dhexgashay cabsidaas oo ku soo dhowaatay iyada oo tilmaamaysa.
Iyada oo la ilaalinayo orsada weyn ee taagan gadaasha jilaaha shaqadan, oo ay tahay inaan u qaadanno in loo yaqaan Ursa, shaqadan dijitaalka ah ayaa ka sareysa dhammaan muxuu yahay muuqaalka aadanaha, halka laga siiyay furaha ku habboon ee ay isku amaahin karto si ay ugu raadiso mid kasta oo ka mid ah faahfaahinteeda.
Jidkaas oo ah nalka qabso oo hooska ku ciyaar Inta badan waxaa sabab u ah xulashada xikmada leh ee burushyada oo lagu kala bixinayo mid kasta oo ka mid ah astaamaha muujinta jilaaga iyo sida ay u sii xumaaneyso in mugdiga loo baneeyo.
Daniel Foust waa abuuraha qaybtaan dhijitaalka ah iyo tan ayaa leh boggeeda internetka laga soo xigtay. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa dareenkooda inprnt.com oo aad barato qayb ka mid ah shaqadiisa si aad xitaa ugu geyso gurigaaga, maaddaama ay jiraan dhowr ka mid ah kuwa aad u cajaa'ibka badan sida midka maanta boostadan magaceeda ku siiya.
Farshaxan kale oo weyn oo laydhka ku ciyaar hab layaableh waa Kaamamka Pascal.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Sawir gacmeed qurux badan oo 'Ursa' ah oo uu qoray Daniel Foust